४ भदौ, काठमाडौ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखको मङ्गलबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार गएराति १२ बजेबाट लागू...
काठमाडौं । रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका दुई बैंकका साधारणसभा शुक्रबार हुँदैछ । २२ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको प्राइम कमर्शियल बैंक तथा कैलाश विकास बैंकको मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्तावसहितको...
काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा भएकाे इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण केही दिनदेखि निरन्तर बढ्दै आएकाे सुनकाे मूल्य बिहीबार करिब १ हजार रुपै‌याले घट्याे । इरानकाे मिसाइल आक्रमणकाे जवाफ अमेरिकाले सैन्य कारबाहीकाे सट्टा...
काठमाडौं । लगानी गरेको कम्पनी राम्रो चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो । तपाइँ यस्तो शेयर स्क्रिपको छनौट गर्नुस् जसले बजारको वृद्धिलाई साथ देओस् तर कसरेक्सनमा पछि हटोस् । तर त्यसो हुन सम्बन्धित कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास...
काठमाडौं । भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मलेसियासँगको विवादका कारण भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । मलेसियाले काश्मिर मुद्दामा भारतको विरोध गरेपछि बदलास्वरुप...
काठमाडौं । आइतबारदेखि निरन्तर बढ्दै गएको बजारले मंगलबार समेत उच्च वृद्धिलाई समातेको छ । बजार परिसूचक मंगलबार १६.२३ अंकले बढ्दा परिसूचक १२१६.९२ अंकमा पुगेको हो । बजार परिसूचक बढ्दै जाँदा कारोबार रकममा समेत दिनप्रतिदिन...
काठमाडौं । तिहारको शुभकामना र आफ्नो कार्यकालको अन्तिम औपचारिक भेटमा रेवतबहादुर कार्कीले कात्तिक १५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा रेवतबहादुर कार्कीले ४ वर्षे कार्यकालमा आफूले गरेका धेरैजसो कामहरुको फेहरिस्त सुनाउन...
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंंगाना नियुक्त भएका छन् । सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिसँगै धितोपत्र बजारको सर्वोच्च संस्थाको...
काठमाडौं । ४ कम्पनीका सवा २ अर्ब रुपैंया बराबरका शेयर आजदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य भएका छन् । ती संस्थाहरुले वितरण गरेको हकप्रद तथा बोनस शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएसँगै बजारमा कारोबारयोग्य भएका हुन् । मुक्तिनाथ...
विश्वमै पुँजीबजारलाई सबैभन्दा लाभप्रद र सबैभन्दा ‘रिस्की’ लगानीको क्षेत्र पनि मानिन्छ । यस क्षेत्रमा बुझेर लगानी गर्नेहरुले छाटै समयमा आफूलाई विश्वबजारमै स्थापित गराएका छन् भने बहकावमा, लहलहैमा वा अर्को कसैले कमाएको...
काठमाडौं । सधैं कारोबारीहरुको योजनाका आधारमा चल्ने बजारलाई आइतबार लगानीकर्ताको उत्साहित मनोविज्ञानले चलायो । लगानीकर्ताको उत्साहकै कारण लगानीकर्ताहरुले बजार परिसूचकलाई निरन्तर बढाउँदै २२ अंक माथि पुर्याउँदा पछिल्लो आधा...
काठमाडौं । बीमा समितिले १० ओटा बीमाको बजार खोसेर ३ ओटा बीमा कम्पनीलाई दिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्षेत्र पाएका ती कम्पनीहरुको १/१ ओटा जिल्ला कार्यक्षेत्र खोसेर समितिले ३ ओटा...
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यहरुको नयाँ उम्मेदवारीका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । माघ ९ गते हुँदै गरेको उक्त निर्वाचनले गोला प्रथाबाट २ वर्ष समयावधि पाएका राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यहरुमध्ये १८ सदस्यहरुको...
बजारमा चलायमान रहँदा धेरै तहबाट फाइदा हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीको निर्णयको बाबजुद, त्यहाँ कति लगानी गर्न, लगानी कसरी गर्ने भन्ने राम्रो बिन्दु तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। धेरै युवा लगानीकर्ताहरूले सम्भावित...
काठमाडौं । प्रजापालन राजाको प्रमुख कर्तव्य हो । संसारमा चलेको धर्म व्यवस्थाको मूल कारण नै राजा हो । राजा तथा शासक कामबाट उत्पन्न हुने शासकका दस र क्रोधबाट उत्पन्न हुने आठ दोषहरूबाट बच्नुपर्छ । राजाको भयको कारणले गर्दा...
काठमाडाैं । स्मार्टफोनको बजार बढ्दो छ । इन्टरनेटको सुविधा पनि पहिले भन्दा सहज बन्दैछ । विद्यार्थीहरू पनि प्रविधिको दुनियाँमा रमाउँदैछन् । कुनकुन एप्स अध्ययन र आफ्नो जीवनमा उपयोगी छन् ? चर्चा गरौं । मेरो एन्सर : यो नेपालमा...
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्ने भएको छ । यसअघि उत्कृष्ठ १० भन्दा बाहिरै रहेको बैंक मर्जरपछि एकैपटक ५ औं नम्बरमा उक्लिने भएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको पुँजी र बजार तात्कालिन बजार...
काठमाडौं । नियामकको निर्देशन र ऐन कानूनहरुको परिपालना राम्रोसँग भएको भए पुस ९ गतेभित्र सबै पब्लिक कम्पनीहरुले साधारणसभा बोलाइसक्नुपथ्र्यो । तर बजारमा सूचीकृत भएका कतिपय कम्पनीहरुले समेत अझै पनि साधारणसभा बोलाउन सकेका...
काठमाडौं । एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर हुने नगद कारोबारको सीमा बढेको छ । अब एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर १ लाख रुपैंयासम्म निकाल्न सकिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर दैनिक सो परिमाणसम्म रकम निकाल्न सक्ने...
काठमाडौं । बजारमा ३१ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य कति हुन्छ ? अनि बजारमा १० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ ? वाणिज्य बैंकहरुमा हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको एनएमबि बैंकको शेयर ३९१...
संविधानले तोकेको असंख्य अधिकारसहितको स्वायत्त स्थानीय तहको अभ्यास हुँदै गर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले हिजोको स्थानीय निकायले दिँदै आएका सेवा सुविधाका हकमा कस्ता सुधारहरु हासिल गरे र...